Online Marg | पेनाल्टीमा चुकेसंगै एम्बाप्पे र फ्रान्सको हार बारे के भन्छन फुटबल विज्ञहरु ?
पेनाल्टीमा चुकेसंगै एम्बाप्पे र फ्रान्सको हार बारे के भन्छन फुटबल विज्ञहरु ?
गए राति विश्व च्याम्पियन फ्रान्स स्विजरल्याण्ड विरुद्ध पेनाल्टीमा चुक्दै अन्तिम १६ बाट बाहिरिएको थियो । पेनाल्टी दौरान निर्णायक पेनाल्टी प्रहार गरेका एम्बाप्पेको पेनाल्टी स्विजरल्याण्डका गोल रक्षक सोम्मेरले रोकेका थिए । किलियन एम्बाप्पे जो रोनाल्डो मेस्सी पश्चातका शिर्ष खेलाडी बन्ने आशा राखिएको थियो उनैले उक्त पेनाल्टी मिस गरेसंगै उनले एक संदेश लिओनेल मेस्सी र रोनाल्डोलाई पठाएका थिए ।
फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय टिमका साथै पेरिस सेन्ट जर्मेनका समेत शिर्ष खेलाडी रहेका एम्बाप्पेले रोनाल्डो मेस्सीको पेनाल्टी नक्कल गर्न सकेनन् । उनलाई पोर्चुगल अन्तर्राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उत्तराधिकारीको रुपमा समेत लिइने गरिएको थियो । रोनाल्डोको युवा अवस्थाको खेल सरह खेल्ने साथै उनको उच्च रफ्तारको खेलबाट रोनाल्डोको बैकल्पिक योजनाको रुपमा समेत लिइने गरिएको थियो ।
३-३ को बराबरी पश्चात अतिरिक्त समयमा पुगेको खेलमा एम्बाप्पेले केहि निकै सानदार मौकाहरु पाएका थिए । यूरो २०२० एम्बाप्पेका निम्ति उतिकै सानदार सावित हुन सकेन । उनले यस प्रतियोगितामा कुनै पनि गोल जोड्न सकेनन् । उनकै सहकर्मी बेन्जिमा भने २०१४ को विश्वकपबाट फर्किएर यूरो २०२० मा समेत ४ गोल जोडेका थिए ।
एम्बप्पेको पेनाल्टी मिस पश्चात धेरैले फ्रान्सको हारमा एम्बप्पेको पेनाल्टी मिस प्रमुख कारण रहेको आरोप लगाइएका छन् । यद्यपी फ्रान्सका किपर हुगो लोरिसले भने एम्बाप्पे फ्रान्सको हारमा कारण नभएको भन्दै एम्बाप्पेको बचाउ गरेका थिए ।
बिबिसीका प्रमुख फुटबल पण्डित ग्यारी नेभिलले एम्बाप्पे खेलमा फर्किने र फ्रान्सलाई जितको गोल दिलाउने बताएका थिए । खेल अतिरिक्त समयमा जादै गर्दा ग्यारीले उक्त टिप्पणी गरेका थिए र खेल सकिएसंगै उनले एम्बाप्पेले आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसरबाट चुकेको ब्यक्त गरेका थिए ।
रोनाल्डो मेस्सी सरह एम्बाप्पे बन्न सक्ने आकांक्षा माथि पछिल्ला २ हप्ताका खेलले ठुलो प्रभाब पार्ने बताउदै उनि पुन लयमा फर्किन सक्ने समेत ग्यारीले बताए ।
अर्का फुटबल पण्डित रोय कियनले भने फ्रान्स विरुद्धको जितमा प्रमुख भूमिका गोल रक्षक यान सोम्मेरको रहेको बताएका थिए । कियन भन्छन एम्बाप्पेको मिस भन्दा सोम्मेरको पेनाल्टी बचाउ उत्कृष्ट रहेकोमा पूर्ण श्रेय सोम्मेरलाई जनुपर्ने समेत दावी गरे । सोम्मेरले लगाएको सहि अनुमान र दबाबलाई झेल्न सफल हुनु नै फ्रान्स विरुद्धको सानदार जित रहेको समेत उनि बताउछन । जितमा गोलको महत्व हुने तर गोल किपरको भूमिका समेत महान हुने उनि बताउछन ।
Tags :किलियन एम्बाप्पे
फाइनलको टिकट काट्न पाकिस्तान र अष्ट्रेलिया मैदानमा, कसले मार्ला बाजी ?
देउवा सरकारको एउटै कदमले गरिदियो कमाल, पर्दा पछाडीका हिरो अल्मुताइरीको खुसीको सिमा नै रहेन् !